https://www.jvxingchemical.com/uploads/f195581d3ac1b837e3dbf21ed64b1b86.mp4 Chigadzirwa Tsanangudzo CAS No. Chikafu Giredhi, Mushonga Giredhi, Tech Giredhi Usage: Animal Pharmaceuticals Kuchena: 99% Chitarisiko: White Poda CAS: 122841-12-7 Chitupa: COA Giredhi: Phamaceutical Giredhi Assay: 99% Min Sample: Inowanikwa COA: Avaialble Cefoselis inoshandiswa zvakanyanya bheji ...
EDB inosimudzira kwazvo amine inosimudzira iyo inogona kushandiswa pamwe chete neVV vanotangisa senge ITX uye DETX yeUV kurapa kweinki, varnish uye yekunamatira masisitimu pamapepa, huni, simbi uye mapurasitiki.
Iyo yakakurudzirwa yevasungwa yeEDB ndeye 2.0-5.0%, uye iyo yekuwedzera yekuwedzera yeve photoinitiators anoshandiswa pamwe chete neayo 0.25-2.0%.
Dichlormid inogona kuvandudza kuramba kwechibage kune thiocarbamate herbicides. Icho chinodzivirira chakakosha kudzivirira chibage kubva mukukuvadza chibage ne dimethyl uye acetochlor.
Pyrazolopyroxypyr isafener nyowani yakaziviswa neBrighton Plant Protection Association muna 1999. Inogona kushandiswa pamwe chete nemimwe mishonga yesora kuchengetedza zvirimwa zvakaita segorosi nebhari kubva mukukuvara.
Deltamethrin (mamorekuru fomura C22H19Br2NO3, fomula uremu 505.24) chena oblique mutemo-wakaita sekristaro ine nzvimbo inonyungudika ye101 ~ 102 ° C nenzvimbo yekubikira ye300 ° C. Inenge isinga nyungudike mumvura mukamuri tembiricha uye inogadzikana mune akawanda manyowa. Inogadzikana kune mwenje nemhepo. Iyo inogadzikana zvakanyanya mune acidic svikiro, asi isina kugadzikana mune alkaline yepakati.
Kusarudza herbicide. Kudzora uswa hwegore (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Brachiaria, Panicum, uye Cyperus) uye mamwe masora ane mashizha (Amaranthus, Capsella, Portulaca) muchibage, mhunga, nzimbe, soya bhinzi, nzungu, donje, shuga beet, chikafu beet, mbatatisi, miriwo yakasiyana siyana, sunflowers, uye zvirimwa zvinomera.
LAMBDA CYHALTHRIN ACID ndeimwe yeanokosha epakati epyrethroid zvipembenene, zvinogona kushandiswa kugadzira pyrethroids inoshanda
Inonyanya kushandiswa sekudzivirira mishonga yesora senge alachlor, acetochlor, chloramphenicol uye EPTC. Inonyanya kushandiswa seiyo
chengetedzo mumiriri weacetochlor nemamwe amide herbicides kudzivirira uye kudzora kiyi. Kazhinji, muyero uri 3-5%. Zvinogona kudaro
kupisa uye zvakashata neacetochlor.
Methylbentonitic acid inokosha pakati nepyrethroids, iyo inogona kuburitsa diclofenac uye triflurothrin kuburitsa pyrethroids senge permethrin, cypermethrin uye cyhalothrin. Semuenzaniso, nzira nyowani yekugadzira ye pyrethroid-permethrin ndeyekuwedzera 3,3- dimethyl-4,6 ine methyl bentonitic acid senge mbishi uye ferrous chloride semutangi mune yakavharwa Chemicalbook system.
Hydrazine hydrate sechinhu chakakosha chemakemikari mbishi zvigadzirwa, zvinonyanya kushandiswa kune iyo synthesis inopupuma mumiriri; zvakare inoshandiswa seaboiler yekuchenesa kurapwa mumiririri; yekugadzira anti-pharmaceutical indasitiri tibhii, anti-chirwere cheshuga zvinodhaka; yemishonga yekuuraya sora inoshandiswa mukugadzira indasitiri yezvipembenene, kukura kwezvirimwa kuyananisa vamiririri uye kubereka,